Amanqaku ka-Arun Sivashankaran kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Arun Sivashankaran
UArun ngusomashishini wobugcisa obesakha, elinganisa, kwaye ethengisa iiwebhusayithi zabathengi kunye nezamashishini iminyaka. Ngaphezulu kwekhondo lomsebenzi wakhe, uncede iinkampani ezinkulu nezincinci ukuba zonyuse ingeniso kwaye zibandakanye abathengi njengomphathi, umcebisi kunye nomcebisi.
Ungazisebenzisa njani iiNgcali zokuHamba kwabaThengi ukuze uQinisekise iinzame zakho zeNtengiso
NgoMvulo, Agasti 2, 2021 NgoMvulo, Agasti 2, 2021 Arun Sivashankaran
Ukulungiselela ngempumelelo iinzame zakho zokuthengisa ukuthengisa ngempumelelo, kufuneka ubonakale kuwo onke amanyathelo ohambo lwabathengi bakho kunye neendlela zokulandela kunye nokuhlalutya idatha yabo ukuqonda ukuba yintoni ebakhuthazayo ngoku nakwixesha elizayo. Uyenza njani lonto? Ngethamsanqa, uhlalutyo lohambo lwabathengi lubonelela ngokuxabiseka kwiindlela zokuziphatha zabakhenkethi kunye nezinto ozikhethayo kulo lonke uhambo lwabo lwabathengi. Olu lwazi likuvumela ukuba wenze amava abathengi aphuculweyo akhuthaza iindwendwe ukuba zifikelele